Logitech Z607 5.1 SurroundSound Speaker-22 ~ ICT.com.mm
HomeAudio & WirelessLogitech Z607 5.1 SurroundSound Speaker-22
HyperX Cloud Orbit S Gaming HeadsetBack to Audio & WirelessLogitech Speaker Z213 (Black)-22
Logitech Z607 5.1 SurroundSound Speaker-22
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: LOG-980-001319, Bluetooth: 4.2 V, RCA to RCA Cables, 3.5mm to RCA Cable, USB Port and SD Card Reader, Remote Control Warranty: 1 Year 160 Watts Peak/80 Watts... [Learn more]
Brand: LogitechFilter by: CVM, Home Theatre Systems, USD
Stock Code: LOG-980-001319,
Bluetooth: 4.2 V, RCA to RCA Cables, 3.5mm to RCA Cable, USB Port and SD Card Reader, Remote Control
160 Watts Peak/80 Watts RMS system နှင့် 5.25 in ရှိ Bass driver ပါဝင်သည့် အိမ်တွင်းသုံး စပီကာစနစ်ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်အသံ (up to 20 Khz) နှင့် နက်ရှိုင်းသည့် Bass အသံ (as low as 50 Hz) တို့ တွဲစပ်ထားသည့်အတွက် အသံစနစ်ကောင်းကောင်းကိုမှ နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မည့် စပီကာ စနစ်ဖြစ်သည်။ 6.2 မီတာအရှည်ရှိသည့် Speaker Cables ပါဝင်သည့်အတွက် ဧည့်ခန်း၊ ဂိမ်းကစား သည့်နေရာများ၊ ရုံးနှင့် အိပ်ခန်းအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပတ်လည် အသံစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဂီတသံများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများအတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည့်အလား ခံစားရစေမည်ဖြစ်သည်။ စားပွဲပေါ်များတွင်သာမက နံရံပေါ်တွင်ပါ အလွယ်တကူတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
160 Watts Peak/80 Watts RMS system witha5.25 in. bass driver fills your room with incredible sound. Hear sparkling clear highs (up to 20 Khz) and deep, powerful bass (as low as 50 Hz) withaspeaker system made for audio lovers. The powerful Z607 wide soundstage makes sure you and your guests always haveaperfect seat to hear it all.
Hear it all with an extra-wide frequency range. Satellite speaker drivers deliver clarity and high-frequency audio detail that feels like you’re at the center of the music, movie soundtrack or game.
You won’t need to rearrange your room to set up and enjoy great audio. The extra-long 6.2m rear satellite speaker cables allow for optimal placement in living rooms, gaming spaces, offices, bedrooms—just about anywhere you want. Set them on desks, consoles and end tables, or easily mount them to the wall.